Nemaparera nemaapuro ... | Linux Vakapindwa muropa
Nguva zhinji, patinoda tsananguro ine chekuita nechimwe chinhu chatisingazive (kangani zvakaitika kwatiri, munzvimbo ipi neipi ...) tinokumbira rubatsiro uye mumwe munhu, aine vavariro yake yakanaka, anoedza kutibatsira nekujekesa. pfungwa asi, kunyangwe paine chinangwa chakanaka cheicho chinotibatsira, zviri nyore ... Hatinzwisise. Ndizvozvo. Tinoda, asi isu hatigone kunzwisisa (chero chikonzero) izvo zvavari kuyedza kutsanangura.
Pandakaneta nekushandisa liveCD ye Kubuntu uye ndakafunga kuisa kugoverwa kweLinux, asi ndichiri kushandisa Windows hongu, ndakapinda mumatambudziko maviri akakomba:
* Ini ndaifanira kuisa iyo distro uye kwete kubata iyo Windows kumisikidza;
* Kuisa iyo distro ... ndaifanirwa kupatsanura hard drive.
Uye chakandinetsa zvakanyanya, kunyangwe kupfuura kurasikirwa nedata rako muWindows, yaive nyaya yekuparadzanisa.
Kubvunza kubasa, mumwe wevamwe vangu vandaishandisa Debian yakajekesa nyaya yekuparadzanisa zvishoma (akatsanangura kuti liveCD installer yaizo "kuratidza" chikamu kwandiri, asi kuti ini ndaigona kuigadzirisa ndoipa saizi yandaida). Kune izvi zvese, ndakafunga "Ndiani ari nani pane Kubuntu pachake achaziva zvakamunakira uye kuti yakawanda sei diski nzvimbo yaanoda, sarudzo yakanaka ..."
Pandakasvika kumba, ndakatanga kuisa Kubuntu, uye nguva yechokwadi payakasvika ... ndakazviziva izvozvo Hapana kana chandainzwisisa. Ini ndanga ndisingazive kuti chii chichaitika kumafaira angu, maitiro ekugadzirisa zvikamu, mafomati avanenge vachizoshandisa kwavari, nezvimwe.
Zuva rakatevera, ndakaisa kudada kwangu muhomwe, ndakaenda ndokunogara pasi nemumwe wangu, ndikati “zvinhu zvese zvaive zvakakwana, izvo zvamakanditsanangurira nezuro, asi kuti ndikuudzei chokwadi… hapana chandainzwisisa. Nditsanangurire zviri nyore saka handisi kutadza«. Uye ndakadzokera kumba ndichinyatso tsanangura dhizaini yekuparadzanisa chirongwa chandingadai ndakasiya chinofanira kutaridzika, saizi inofungidzirwa yeumwe neumwe, mafomati avanofanirwa kushanda, nezvimwe. Chidimbu chebepa icho, chine mitsara mitanhatu kana minomwe yekudhirowa (iyo yandinayo) yakanga yandipa chengetedzo yandaida. Yakanga iri pfupiso yakakwana yezvandakanga ndatsanangurirwa kare, asi izvo zvandakanga ndanzwisisa pazvakatsanangurwa kwandiri yakaderera mwero.
Patinotamira kuLinux mushure mekukura neWindows, ndima yacho inova yakaoma, uye isu tinoda yakawanda yeiyo yakazara izwi reLinux kuti iiswe parutivi uye, ine peritas uye manzanitas, titsanangure chii chavari kutaura nezvacho.
Dambudziko nderekuti, mumaonero angu, kuodha mapera nemaapuro kubva kune mumwe munhu anoziva Linux hazvisi nyore.
Kune chero munhu anga aine dambudziko neLinux (yeiyo nhanho-kuomarara iri) uye abuda kunotsvaga ruzivo pawebhu, tsvaga akati wandei emazinga emhinduro:
* danho rakaoma;
* yepakati nhanho;
* muchiRomanian chakakosha;
* mune mumwe mutauro wakafa umo chinhu chete chinonzwisiswa "kernel". Tsananguro muRomania dzingave shanduro dzakareruka dzedudziro idzi;
* yepakati-nyore chikamu.
Vanogona kundiudza zvisina tsarukano, hwindo kana zvakadaro zvaunoda, asi chero zvichinditora katatu kana yakareba, ndinosarudza mhinduro dzepakati kana dziri nyore. Ndinoda mapera nemaapuro, uye ndinoatsvaga kusvikira ndadziwana.
Dambudziko nderekuti pane mashoma mhinduro. Ini handikwanise kutsanangura kuti sei, kana mune ino chaiyo blog yakaratidzirwa zvakakwana kuti kune dzakawanda Linux shamwari dzakarembera padhuze newebhu dzichida kubatsira nekutsanangura. Pamwe imhaka yekuti paine huwandu hwakaenzana hwe Anti Windist Linuxers.
Ngatiregei kudzikisa mwero, ngatitorei vanhu vazhinji kuti vatenge. Kana tichida Mahara Software kuti isvike kune wese munhu, ngatiitei kuti iwanikwe kune wese munhu. Tichitsanangura pfungwa dzekutanga zvakajeka, isu tichafambira mberi pane akaomarara ane hwaro hwakasimba.
Nhasi ndinokusiira peya rangu uye apuro rangu nezve mbiri pfungwa dzekufunga nezvadzo patinenge tichiisa kugoverwa kweLinux, kana mumwe munhu achida kuvasimbisa kana kuzviwana :) (nemifananidzo yakajeka chaizvo.
Chii chinonzi Disk Chikamu? paWikipedia
Chii chinonzi Disk Defragment? paWikipedia
Ini ndakamirira makomendi ako, ndingafarire kuziva kana uri kusiya mapee nemaapuro, kana kana uchitaura chiRomania: D Kwaziso hombe ndokuona nguva inotevera!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » NdiPeritas nemaApple ...
Kuenda pasi kumutauro weWindows kuti utsanangure chimwe chinhu hakusi "kudzikisa mwero", asi kuri kutsanangura chimwe chinhu zvichibva pane chimwe chinhu chakashandiswa nevanhu vangangosvika zana muzana, zvobva zvanzwisisika.
Iwe unonyatsofunga here kuti mhinduro dzaMicrosoft kumatambudziko ako dzinonzwisisika? Mumaforamu mhinduro dzakajairika (nekuti ndiyo nzira mibvunzo yacho) inoreva "Sei kupaza ichi kana icho chirongwa" (uye kunyangwe ipapo nzira dzimwe nguva dzakaoma).
Zvikasadaro isu tinowana zvakajairika Windows matambudziko ayo Microsoft anopindura "kudzoreredza" kana "tsvaga chigamba" (icho kana usina windows yekutanga haungakwanise kugadzirisa, nekuda kwekushaikwa kweWGA), uye izvo inotungamira kune havasi ivo chete vashandisi veLinux vano'iomesa ', asiwo kubva kune rimwe divi.
Kune izvi zvinowedzerwa kuti tsika yemushandisi weWindows ndeye "kuigadzirisa / kuita imwe" uye havasi kutarisa zvakanyanya pawebhu (ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika munharaunda yangu).
"Kune izvi zvinowedzerwa kuti tsika yemushandisi weWindows" kuigadzirisa / kugadzira imwe "uye havasi kutarisa zvakanyanya pawebhu (ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika munharaunda yangu).". Kwete kudaro… zvirinani munzvimbo yangu. Icho kana kana chiri chirevo chinofungidzirwa chemadhorobha ...
Andres Vasquez akadaro
Iyo yakanaka posvo, svondo rapfuura ndakaita zvimwe chete, kupatsanura diski, kuisa kubuntu (masanga?), Iye zvino ndiri kuishandisa, asi sezvo ini ndisina kuverenga chero chinhu nezvazvo. zvisingaite zvandaiziva kubva pakuwanda kwandakaverenga kare kare .. Ini ndakagadzira iyo swap partition, uye 3 gig ext3, asi mushure mekuvandudza nekuisa mamwe madhiragi anodiwa kwandiri. Ini ndanga ndatopera disk space :(
vhiki ino ndiri kuzodzokorora maitiro ese, asi izvozvi ndiri kuzopa yakawanda nzvimbo yekubuntu.
Pindura Andres vasquez
Kune nzira chaidzo dzekutsanangura zvinhu, muChristu, kune wese munhu, zvisinei, pane mania evamwe ekuti chinhu chiri nyore chisanzwisisike, zvikonzero? Edza kuratidza kuti une ruzivo uye kuti iwe uri kupfuura vamwe vese. Hazvina maturo.
Ini ndinowanzo gadzira chikanganiso ichi, asi pandinonzwa kuti vanondiudza "oh ndizvozvo, mmm hongu inofanirwa kunge iri" Ndinoyeuka kuti shamwari dzangu dziri kutanga neLinux uye ini ndinoedza kutaura navo zvakapusa, hehe, windows style, pasina kuve nyanzvi asi ini ndinokwanisa.
Zvichida chimwe chinhu kunze kwekuoma kwemagwaro uye tsananguro dzinowanikwa pawebhu, ndezvekuti iri muChirungu muhuwandu hwayo uye kune vakawanda icho chipingamupinyi chisingakundiki, kana vakasachiwana muchiSpanish zvinoita sekunge hazvipo.
Ini ndinobvumirana naN @ ty kuti chokwadi chekuti inowanikwa kune wese munhu hachisi chekudzikisa mwero, kana tichida kuti vanhu vazhinji vaushandise, tinofanirwa kutaura navo nenzira yavanonzwisisa, hapana munhu akazvarwa achiziva.
Ndine bhegi remapeya nemaapuro, uye zvidhinha zvishoma zvevanovimbika, hehe.
Pindura kuna master666
Kubudirira vs Ease
Wati wamboverenga here chero eayo emawindows emabhuku ekugadzirisa tambo yenhare mbozha? Kune anopfuura anopfuura masere mapeji muPDF ane mumwe mufananidzo mushure meumwe.
Kugadzira fananidzo, mumasisitimu eUnix-zvinozoitwa mumitsara inopfuura mishanu yekodhi.
Zvino, wadii kupinda kuzoita zororo, chimwe chinhu chiri nyore asi chinoshanda?
Hehe, ndosaka ndichifarira ubntu, ngatiregei kuomesa vanhu nekutsvaga madhiraivha kubva padandemutande, kudhawunirodha, kuvatarisa neantivirus, pinda kaviri, tinya, tinya, tinya, tangazve. Kunyange Sudo apt-tora kuisa "nvidia-madhiraivha" dpkg-kugadzirisazve, handizive kuti yakawanda sei ...
Kungodzvanya kamwe chete kubva pakuva nemutongi ... saka nezvose ... Zviri nyore ... KISS Maitiro. Pasina kurasikirwa nemukana wekuzviita nenzira inoshanda kwazvo .. (nekoni)
kernel_panic, yaive elf yemadzitateguru yaitaurwa nevanakomana vaIlúvatar? Elven kubva kuNoldor? Kana iyo yakajairika iyo inotaurwa mumasango eMiddle Earth? izvo hazvinzwisise.
Zvinoenderana, ini ndaona yakawanda yevashandisi vasingazive maitiro ekuita chero chinhu vega. Asi izvo zvinoitika kunyanya nevashandisi vasingashandise PC yavo zuva nezuva kana vasingashandisi iyo Internet kupfuura izvo zvinonyanya kudikanwa. Vamwe vanokwanisa kuzvitsvagira vega, kunze kwekunge vaine "computer geek" mabhuroko maviri kure anouya kumba mahara kuchinjana tii nemabhisikiti.
Asi ikozvino tichienderera kumberi kunenyaya inotisanganisa, ndinofunga ma linuxers avandudza mwero, ivo vari kumisikidza ruzivo rwavo uye hausi kuona zvakataurwa zvakanyanya kare nezve nharaunda dzakavharwa dzizere neMitemo, zvirinani munharaunda izvo dzakatsaurirwa kune distros inozivikanwa. Asi mune izvo zvinonzi maLUG kana nharaunda dze "distros dzevarume" zvakanyanya kuomarara, havachatsanangure nemapere nemaapuro.
Ndiri kuona kuti kunyangwe paine maonero akasiyana uye zviitiko, zvizhinji zvakafanana nezvangu.
Kune rangu divi, ini ndakadaidzwa kusingagumi nguva "komputa pringao" (sekumudaidzwa kwavanoitwa nevapoteri) kana "benzi rinoziva nezve izvo zvinhu" sekushevedzera kwavakamboita ini. Uye zvandinoita kutsanangura zvinhu kubva zvakanyanya kana kushomeka kumberi kuti "ngationei mwana .." (ndichipfuura nepakati pemapere nemaapuro), uye kwete chete ne linux (system yandiri ndichiri mushandisi mutsva) asi mukombuta sainzi mune zvese
Pindura kuna joacovidal
Ini ndiri mumwe werudzi. Bvumirana newe nacho, kunze kwechimwe chinhu. Ini ndinotenda kuti vanhu havana kujairana neWindows, asi Win akagadzirwa kuti agadzirise uye asvike kuvanhu vazhinji sezvinobvira. Uye izvo zvinowanikwa nekureruka, kureruka, nezvimwe. Zvino izvo vanhu vatove vakapindwa muropa panguva ino ndechimwe chinhu. Kana kana mumwe achigara mune chero munda achitsvaga shanduko.
Ini ndinobvuma zvachose. Kuwana vashandisi veWindows kana mamwe masisitimu anoshanda kutamira kune chero kugoverwa kweLinux ndeye odyssey. Dzimwe nguva nekuti isu tinokanganisa tsananguro, tsananguro inyanzvi kwazvo, tinoshaya dzidziso, nezvimwe. Asi ini ndinofunga chimwe chinhu chakapotsa chakatadzisa dzimwe shamwari neni kubva mukutamira kuLinux yaive inguruve dzeLinux. Avo vasingadi kusangana nevanhu vanonyepedzera kusimudzira kushandiswa kweLinux, asi gara uchirwisa chero munhu anoda kuyedza kudzidza chimwe chinhu nezveLinux uye yakawanda mumaforamu, irc chats, nezvimwe. Chinhu chakaipisisa pane zvese ndechekuti vanhu vanozvitya, vanozvibvumira kutukwa uye dzimwe nhengo dzerondedzero yekwaya, nezvimwewo usaite chero chinhu ini chandinokurudzira kuti uverenge chinyorwa ichi chakareruka pamusoro pavo http://cl4551f13d.wordpress.com/2008/10/14/como-reconocer-a-un-linuxcerdo/
Pindura kuna cl4551f13d
Zvakanaka ... zvinoenderana nekuti iwe unoda kupa mhinduro sei, zvirinani zvionekwe kubva pakuona kwerubatsiro ...
Ini ndakakwanisa kuwana shamwari zhinji kuchinjira kuLinux (kunyange kuishandisa seiyo chete OS: D) uye kune yega yega pane mhinduro yakasiyana kumubvunzo mumwe chete.
Ini ndinotaura izvi nekuti nekuziva munhu wega wega wauri kubatsira, munhu anogona kuziva kuti ndeyipi nzwisiso yavanayo nezvazvo ... Ini ndinonyatsoda kutanga tsananguro mune kumwe kutora kwekare elvish (sekukwanisika sezvazvinogona: ini handisi guru ) uye kana ndikaona vane zviso zvisinganzwisise kana mbatatisi zvishoma nezvishoma tinoenda kumapere nemaapuro sekutaura kwa esty.
Chinhu chakanaka chekuzviita sezvizvi ndechekuti iwe haungodzidza chete maitiro ekuita zvinhu, asi mashandiro ainoita.
Ichokwadi, kune windowser inoita shanduko, mapeya nemaapuro ndiwo akanakisa, asi kana iwe wawana iko kusungirirwa kwayo (uye kana uchiifarira) iwe unosarudza tsananguro dzemutauro wakafa.
Chimwe chinhu chiri chechokwadi kune vazhinji (vazhinji, asi kwete vese) windowsers chimwe chinhu chandiri kuramba, pamwe nekuda kwechiitiko chavo (kubwinya kwake ... munyika ino kune marudzi ese evanhu), inova uzivi «izvo mumwe munhu anozviita ", kunze kweavo vanonyatsoisa mukati memazamu emakomputa, vese windowsers vanoda, sezvandakaona mune imwe blog," hofori bhatani rinoti JUANKEAR uye iyo kana uchisvinira juankee "
Ehezve, zviri nyore kwavari kuti vakuitire iwe ...
Uye icho chinhu chandisina kumboona (kusvikira zvino) mune chero mushandisi we linux ... kusvika parizvino munhu wese ari kufarira kudzidza maitirwo ezvinhu uye kunze kwevakadzi vandinoziva vanoishandisa (haisi kuita zvebonde, ini zvinongoreva vanhu vandinoziva!) vese vanoda kuziva kuti zvinoshanda sei.
Chinhu chekupedzisira, ini, ndinokwanisa uye kunonoka zvishoma, asi hauna kuyedza wubi? Iyo inosimudza ubuntu pamawindows ayo anoisa iyo (X, K) Ubuntu pane diski, pasina kudzima windows, pasina kuita chero chikamu kana chero chinhu, asi iyo faira ingangove iyo system system / mu linux, ndiyo iri nyore kuita kunyangwe isiri iyo inoshanda zvakanyanya (defragment in windows mushure mekuzviita). Sezvo zveUbuntu 8.10 (ndinofunga, inokwanisa uye pamberi) inotouya nekukasira paCD saka kana iwe ukaiisa mumotokari kana iyo CD yakavhurwa, sarudzo yekuisa iyo kubva kuWindows inofanirwa kuoneka.
Zvakanaka N @ ty, zvakare pfuura izvo, uye ini ndinofunga vese vashandisi veLinux mune zvese.
Ini ndinonyatsokunzwisisa iwe, kune linux-vashandisi veava vasina desktop, vanoshandisa mamaneja ewindows, ayo avanonyatso ziva, asi izvo zvekuziva vanokupa dzimwe tsananguro dzandisingazive kana Linuz Torvalds pachake achivanzwisisa.
Kana iwe uchiramba uchikomberedza neLinux, iwe uchaona iro zuva richiuya apo tsananguro zhinji idzo nhasi dzinoita sedzakoma kwauri dzinoita senge dzakapusa uye pamwe kutopusa, nei? nekuti panguva iyoyo uchave uine zano riri nani rekuti linux inoshanda sei.
Pamusoro vakanyora linuxcerdos haha, ini ndanga ndatokanganisa kuverenga nguva dzandakaverenga mumaforamu, kunyanya ubuntu, kwavakabvunza kuti terminal yaive chii uye yakavhurwa sei mu ubuntu.
Mumwe munhu andiudze zvekuvatumidza.
Ini ndinofunga zvakajairwa. Pasina kuenda kumberi, ini ndichiri kutsvaga ebook rakagadzirwa nomweya wakajeka kuti utange kudzidza python muchiSpanish, kunyangwe muchiSpanish chekare kana zvichidikanwa: S
Iwo andakawana ... ini ndinofunga zvaive zvakanyanya senge yechinyakare orc, zvirinani kuti zvainzwika zvakanyanya kusanzwisisika
Uye mapeya nemaapuro ... ehe, zvakanaka. Ndakamboita rombo rakaipa zvakadaro, asi ndaona vanhu vazhinji vanoti kwauri paunotanga "handina kana ruzivo nezvekomputa, handizive zvauri kutaura" uye kuti wakavaudza chete kuti vaise CD muverengi uye tangazve ...
Saka chokwadi ... ehe, pane zvese. Ini ndaifanirwa kutarisa kuburikidza ne gazillion foramu yemapeya, maapuro uye mazambiringa kuti ndizive magehena ekugadzirisa mutyairi weATI (Dapper, kuti ive chaiyo xD).
Musiyano unoitwa nehumwe pamwe nemamwe ma distros anogona kunge uri iwo, kuti nharaunda iriko chaizvo, yeZVESE.
Ndinoedza kujekesa ... asi hei, zvakafanana nezvose. Kana vakangoshandisa PC chete kuona mafoto uye facebook ... zvakanaka, ini ndine usimbe kutsanangura kuti zviri sei.
Kune vamwe vakaona PC yangu (Menus awn, full compiz, transparencies, unopisa windows ...) uye vanokuudza kuti uise linux pavari (Kunyanya iya yemavirusi eXD) asi mumwe anofunga «Watumira PC kuti ive yakarongedzwa na Iwe hauna kana zano ... Iwe unofunga kuti zvese izvi zvakagadziriswa zvega here? Iwe unofunga zvese zvandakauya mune yangu gutsy pack? Nhanho babamunini, gara uchifunga kuti urikunyatsoita zvakanaka ».
Ndo zvandataura mune imwe posvo ... kutsanangura kwakanaka kwazvo ... pavanokunzwisisa. Kana kunyangwe iro izwi rekuti apuro, iro rine zviyero zvitatu, richivatyisa, vanhu ivavo havana kukodzera chero chinhu chiri nani kupfuura MS.
Ndine urombo kana zvinonzwika zvine hukasha, asi ini handitambise mweya wangu kune vashandisi vasingade kudzidza CHINHU.
Ubuntu inogona kushandiswa musingazive, hongu, asi handisini ndinayo "pringao-howto" uye handidi kutsanangura kuti nei windows zvirongwa zvisingayamwe mu linux "saka sei hongu". Kwete zvimwe zvakawanda zvinhu.
Kungoti nekuti ini ndinoshanda ndichigadzirisa zvakapusa zvikanganiso mukuchengetedza dombo rakaomarara uye mumwe anowana kuguta nezvisina maturo. Kana ivo vasingazive kuti mugadziri wekofi haashande kana isina kuvharirwa mukati (Chokwadi, ini handisi kutamba) zvirinani vatsanangurire maitiro ekugadzirisa account yavo yehotmail kuitira kuti vatore tsamba vasina kuve pawebhu, Semuyenzaniso.
Pamwe hapana huwandu hwenguruve sezvazvinoratidzika, asi mazhinji acho anopiswa pringaos.
(Kunyangwe izvi hazvireve kuti mazhinji ndeechokwadi)
Tinodzokera kune imwe posvo: Windows yagadzira chikoro che «mumwe munhu achachiita» «zvese zviri nyore, uye kana chimwe chinhu chikatadza iwe fomati» uye «hapana zvirinani».
Iwe unogona kurwisana neizvozvo, asi pakupedzisira iwe zvakare unoneta uye woona kuti vanoramba vachityora nyanga dzavo nekuhwina iwe uchifara ne linux.
Ndinotarisira mameseji kubva "Troll!" uye "MUTEMO!" XD
PS: esty, iwe uri mushoma, zvakakomba = hongu
Ini ndinobvumirana ne100x muzana naNacho mune izvo, isu tichave pachena nezve chimwe chinhu kana mushandisi achida kutama kubva paWindows osvika kudivi rerwizi inova Linux, imhaka yekuti chimwe chinhu chiri mumusoro wake chinomuudza kuti iye yaneta nechimwe chinhu chinowanzoitika kana protocol inogona kupfuudzwa, antivirus, defragment, fomati, nezvimwe ,,,
Kana iwe ukangotora iyo leap nekuti iwe unoda kuona yakashongedzwa windows uye mhedzisiro pane desktop yako
Iko kusvetuka kunosuruvarisa uye kune ngozi nekuti unozopedzisira waremara uye wakashungurudzika ankle
Nekuti pamhinduro yakapusa yekuti kuve nehurongwa mune akakwana mamiriro, angave windows, linux kana mac, isu tinofanirwa kuzvipira zvishoma kupfuura kungoona mavhidhiyo paYouTube, kutaura kana kutarisa facebok uye kufonera nyanzvi kana muvakidzani anoziva chimwe chinhu. kupfuura iwe. kugadzirisa muchina wako mukutsinhana nesoda uye mamwe makuki
uye iye achakupa tsananguro yekuti saka ndinogona kukupa iwe nemapere kana maapuro.
kuti unzwisise zvavanokuudza ipapo hazvina basa kuyambuka rwizi
Kunyangwe zvichinzwika zvakaoma asi funga nezvazvo sezvo izvi zvichiti kune vanhu vazhinji vakapindwa muropa nekushaikwa kwekuziva vanoona internet semuenzaniso wefashoni wevakawanda avo, sevamanikidzi vevatengi, vari kusaina kuti peji rakawanda rinowanikwa mune marara mangani ivo tsvaga pa internet kana ikabuda iyo hi5 ini ndinonyoresa uye pasi peese maapplication andinayo ah yatobuda mufashoni ipapo nzvimbo yangu, kuti chinotonhorera ndiyo facebok yatinoendako, vanhu vamwe chete ivavo ndivo vanoendesa mberi email ine mukurumbira yekuti vari kuzovhara hotmail, uye Bill Gates ari kupa hupfumi hwake
Ivo vanhu vamwe chete ivavo ndivo vanofona kazhinji kune uyo anoziva zvishoma kuti sei ndisingavhure tsamba kana nekuti vanowana hwindo rinoti iwe uri mushanyi nhamba 99999
Izvo hazvisi zvekutsanangurira vanhu kuti Linux yakanaka uye yakapusa, iri yekuona zvavanoda uye zvavanoda nezvazvo nekuvaita kuti vanzwisise kuti Linux haisi fad
Uye kuti chero sisitimu yekushandisa seiyi inokuudza kuti ndiyo ine simba kwazvo, yakagadzikana, inoda ruzivo uye imwe nguva
uye chakanyanya kukosha chinhu chausingakwanise kubata sisitimu yekushandisa sekubata kwawakaisa iwe
Izvo zvakare ndezvekuita kuti vanzwisise kuti kana mumwe uyo kana zvishoma akaziva chimwe chinhu, munzira akagadzirisa x, atyora mapakeji uye kutsamira kwakatora mapurogiramu mazuva, vhiki nemwedzi kuvaka nekuumbiridza.
uye vazhinji vedu vakadikitira uye vakagara kumusoro kana chimwe chinhu chikatadza nehurongwa hwedu kusvika tazomira kurara saamai vanoramba vakamuka kumwana anorwara
ita kuti vanzwisise kuti mugwagwa unozove wakasvibira uye wakasvibira kwavari nekuti ivo vanosiya kumashure izvo zvakambovakonzera kutemwa nemusoro muhurongwa hwavo hwekare uye ivo vanozove nenharaunda inoda kubatsira chero matambudziko anomuka asi kuti kunyangwe zvese vachifanira kushanda nesimba uye dzidza kuzvinzwisisa uye kubata nezvimwe zvinhu futi
kuitira kuti mune ramangwana ivowo vabatsire kuti nharaunda yakavabatsira sei
Ini ndinofunga iyo ndiyo yakachena yakaibva peya iyo yavanogona kukupa iwe
Ndinovimba handinetse mumwe munhu nekomendi yangu.
kamwe zvakare makorokoto nekuda kweiri rakanakisa peji :) iro randakapindwa muropa naro
Ichokwadi esty, ipapo iyo LAW xD divi rakabuda, ichokwadi kuti mawindo paakatanga, sekuru veiyo yazvino linux yaive iri dodgy console = s
Asi izvo hazvireve kuti nhasi iwo maWindows zvimiro zvakagamuchirwa, apo chokwadi ndechekuti sehurongwa hwakanyatsojeka kumushandisi (Pasina kuenda kumberi, iyo skrini inokuyambira kuti C: inogona kuva nengozi xD) uye ine zvinhu izvo zvemushandisi we linux zvisingawanzoitika, sekufanirwa kuisa madhiraivha (Zvese) apo Hardware yese inogadzirirwa windows.
Ini handizive, ini ndinopfuurira mune yangu, iwe unofanirwa kusiyanisa pakati pevaridzi veyako system, uye vashoma vashandisi.
Ini ndinofunga ndiyo kiyi.
Kwangu uye vazhinji, kuziva mashandiro anoita chimwe chinhu kunonakidza, ndosaka ndichifarira komputa, panogara paine chimwe chinhu chitsva. Kune vamwe, chero bedzi zvichishanda, zvakatove zvakakosha.
PS: Nhasi uno network yakazara inoshanda nemahwindo yadonha, zvinofadza sei kuudza director kuti "ndine hurombo, hapana chandinoziva nezve windows, ndinoshandisa linux, fonera Orlando kuti ndione zvavanotaura"
Saka kuti gare gare ivo vanotaura nezverima rerutivi rwemasimba, iyo LAW divi rekomputa yakatosimba xD
Esty, usatsamwa, asi ndinodzokorora "kubva pane ruzivo rwezvakatipoteredza" vashandisi veWindows pano (uye kana ndikati pano ndinoreva Argentina) ndizvo zvandataura. Ivo vanoda "kuvaitira zvese."
Ichokwadi kuti iwe unofanirwa kuziva kutsanangura zvinhu. Ndinoziva izvi nekuti ini ndaive mudzidzisi wesainzi yemakomputa kwemakore matatu, uye ini ndakadzidza kutsanangura zvinhu (zvirinani kana zvasvika pane chimwe chinhu chandinoziva, senge komputa sainzi). Kunyangwe zvakadaro, mumwe anosangana nekutya kwekutanga kwemunhu: «zvisingazivikanwe», uye chinhu chekutanga chavanowanzoita kuiramba pasina chikonzero (chingave chitsva chekushandisa, musn musiyano kana mhinduro ku «nekuti inosvetuka hwindo kuti ndine hutachiona »)
Zvakajairika ... ndatojaira. Kunyangwe zvakadaro, ichokwadi chisingachinje izvozvi ... uye ndechekuti kana vakajairira kurerukirwa kwe «inotevera ... inotevera .. inotevera ... pedzisa» zviri pachena pane kutsanangura kuti "iyo inotonhorera diki ane PASI "kana kutsanangura kuti muchina unononoka nekuti vanoisa zvese" bhagi "ravakawana paInternet, rinova rakaomarara chiuru.
Aaaaa ... nacho akandipa iyo razooon, akandipa iyo razooon, lerolerooooo !!!!!
hardstone ... Ini ndinobva kuArgentina. Ini handitsamwe, ndinongodaidza nzeve yako kuti iwe usaite general. Izvo zvese zvinoenderana niche yauri mairi. Dai iwe wanga uchidzidzisa zvirongwa mumusha unochengeterwa vakwegura, iwe waizopa general kuti vese programming vadzidzi vari relentos. Uye kana ini ndaidzidzisa sainzi yemakomputa muchipatara comatose kamuri, ini ndaizoita general ndikati kana ndichida kudzidzisa, hapana munhu anondipa bhora. Ndozvandichaita. Usazvivhare mumwana mupfupi kwauri, nyika yakafara uye kutendeuka maWindows hakuna kuoma, ingano.
Uye sekutaura kwandakaita nacho, mumwe haana kujairira iyo «inotevera inotevera inotevera kupedzisa», asi neimwe nzira yakatenderedza, nyika yekomputa yakaenzanisirwa pane izvo zvinoda vashandisi. Kana OS ikasaita zvandinoda, kana isingaite kuti ive nyore kwandiri, hazvigone kuti inondifadza.
Panzvimbo pekuramba zvese izvo, ndinofunga Jorge kuti chako ndicho chinonyanya kushanda.
Iwe waifanira kubvisa runako kubva mukukunda kwangu ...
Mhoro, kana ndikakuudza chokwadi, ndinopesana nezvikamu uye kunyanya kana zvaitwa pakati pe linux ne win2, vanopedzisira vopa matambudziko, chinhu chakanakisa idhisiki rakaomarara re win2 uye imwe ye linux
@Jorge: Ndicho chinhu chinonzwisisika chandakaverenga kubva kumashoko makumi maviri apfuura.
Chinhu chega chandinoziva ndechekuti ine zita rayo kune iyo Mwedzi ... mamwe macapos vakomana. Vakatumidza Pyton naSpam.
mmmm chiitiko changu ne2 partitions kana disks, ndeyekuti pakupedzisira unongoshandisa imwe chete. Kazhinji, kana iwe ukashandisa linux uye windows ndezvemitambo, unozopedzisira wamira kutamba, uye kana ukashandisa windows, uye urikuedza linux, unozopedzisira waenda kumahwindo pane yekutanga alarm chiratidzo yausinganzwisise.
Ini ndaifanira kuisa chete chikamu kana ndaida kuenda kuLinux zvachose, pasina muyedzo wekuenda nyore ...
Uye chimwe chinhu: esty, ndati "pakutanga, pandakasiya mahwindo, kwete mushure makumi mapfumbamwe neshanu kuti paitova nemifananidzo yakajeka mulinux": P
xD Ini handingataure zvakanyanya sekubvisa runako, zvimwe zvese, tsanangura zvishoma;)
nenzira, kana paine anoziva peji iro python inotsanangurwa kune vasiri vaRomania, zivisai, ndapota, komputa yesainzi zvikoro zveSpain vanofunga kuti python kutuka kana chimwe chinhu chakadai = s
Inobatsira sei wikipedia, handiti? XD
Chinhu chimwe chisingabvumirani neichi chinotevera, windows havana kugadzirirwa kuchinjika ... nekuti hazvizviite nekukasira kwainofanira ...
Microsoft ikambani, vanofanirwa kupa chigadzirwa kumutengi, vane zano rekuti vatengi vacho chii uye kugadzirira chigadzirwa chakavakirwa pairi.
Zvino ko kana usiri weboka iro Microsoft inofunga semushandisi wekupedzisira? Iwe uri f * cked * nekuti zvirinani iwe uchafanirwa kumirira makore mana kusvikira imwe vhezheni yabuda, iyo inowanzo kuve yakanyanya kufanana chinhu (iyo iyo, iyo inotanga na m xD).
Kubatsira kukuru kwe linux ndechekuti kune imwe yemunhu wese, yakafanana nerudo, ingori nyaya yenguva kusvika iwe wawana chaiyo distro
Pindura kune kernel_pamic
Esty… kana ndichireva "zvakajairika" zvevanhu handisi kureva mienzaniso yako yejeniki kana chipatara. Ini ndauya nevanhu vakura vanonzwisisa ZVAKAWANDA kupfuura mwana ane makore gumi ekuberekwa uyo anonyatsonzwisisa maitiro ekuwana hupenyu husingaperi nezvombo muCounter Strike, asi ndiani asingazive kutsikisa izwi muShoko (semuenzaniso).
Zvisinei, ini ndinoedza kutsanangurira vanhu veese mazera, vanhu "vanozvipa misoro yavo", asi zvakadaro vanoshandisa "kuzviita iwe pachako." Ini ndinodzokorora, ndinotaura kubva pane zvakaitika pakurarama makore mashanu ndichitsanangurira vanhu vazhinji.
Pasina kutaura, kuti kunyangwe nechero distro, iwe unogona kuisa ruoko rwako pairi kusvikira iwe uchisiyira chaizvo zvaunoda ... pasina dambudziko uyezve, nenzira yakatenderwa
kernel_pamic, saka avo vanoshandisa linux ndivo vashoma?. Iwe haugone kufadza munhu wese ,: D.
Uye isu tinofanirwa kubvuma kuti pakati pehwina 98 neXP pakave nekuvandudza kukuru asi kukuru. Zviripachena pakati pe xp uye vista kwete.
Ini ndinogona kusiya distro nenzira yandaida nayo? Uye ndingaite sei izvozvo? Kuisa ruoko rwangu mukodhi? ... zvakanaka ... saka hazvisi zvangu.
hardstone, ndinodzokorora, handifunge kuti ndiyo yakajairika Windows mushandisi, asi hei, tinowira munzvimbo yekutenda neruzivo rwedu, ndinofunga isu tiri munzvimbo dzakasiyana.
Parizvino, avo vedu vanoshandisa Linux ndivo vashoma, asi ikozvino ...
Wareva, haugone kufadza munhu wese, asi zviri nyore sei kuvafadza? Kuvapa menyu yakasetwa e4 sandwiches kana kukupa iwe zvigadzirwa kuti mumwe nemumwe agadzirire yavo sezvaanoda, anokwanisa uye unoifarira nemayonesi, asi kwete ini, uye hazvina kunaka kuti ndinofanira kudya imwe ine mayonnaise nekuda kwekuti Iwe unozvifarira pamwe uye zvisina kunaka kuti unofanirwa kudya imwe isina mayonnaise nekuti ini handidaro.
Ehezve iwe unogona kusiya distro sezvaunoda, uye kune zvakawanda zvinhu haufanire kubata iyo kodhi, mune chimwe chinhu senge makore matatu uchishandisa linux iyo chete nguva dzandaifanira kuita chimwe chinhu "rima" chave
a) Ini ndakagadza mutyairi wekadhi rangu revhidhiyo kekutanga, panguva iyoyo yaive netemu, asi mwedzi yakati gare gare ndakaona kuti zvaigona kuitwa kuburikidza neyakareruka graphical interface
b) Ini ndakatanga kuumbiridza pamwe nekumisikidzwa kweiyo graphical server, saka ndakatamba yakawanda neiyo pakati pekuikuvadza nekuigarisa
c) Pandakadzosera kernel zvinoenderana nemuchina wangu: p asi izvo zvaive zvemafaro akachena (kunyangwe ini ndakadzikisa nguva dzebhutsu kubva pamasekonzi makumi matatu nemaviri kutanga kusvika gumi nematanhatu)
d) Chinhu chandaifanirwa kuumbiridza nekuti pakanga pasina pasuru yekumisikidza zviri nyore
Pamwe mumwe anondipukunyuka, asi hapana kana imwe yezviitiko zvandaifanirwa kuita chimwe chinhu chakajairika pamatrix pane cheumwe mushandisi + 1
Chii chaungade mu distro?, Semuenzaniso, ngatione kana chero mumwe wedu akapinda munhaurwa iyi anogona kukuudza maitirwo azvo nenzira yakapusa (maererano nemaperema nemaapuro :))
Inonakidza chikamu, kunyanya ini, kuti chokwadi chinondipa kutya kuisa linux uye kupinda mune iyo nyaya, ini ndinofunga kuti mupfungwa iyoyo kuiswa kwacho kwakanyanya kuomarara uye hakuna kujeka kune wepamberi mushandisi mushandisi.
Ini ndinobvumirana newe pane chimwe chinhu, kuiswa kweavhareji / epamberi mushandisi kwakanyanya kunetsa pane kune akajairika mushandisi ...
Imwe inouya kubva kumahwindo akasununguka aine imwe nzira yekuita zvinhu, nzira yekuti munhu ave nehunyanzvi nekufamba kwenguva, uye kamwe kamwe munhu anowira munzvimbo isingazivikanwe zvachose, uko iyo mirau yapfuura isingashande, mumwe anoti «ndizvo izvi? ??? " uyezve anozvisiya nekuti anoti "chii chakashata, icho hachigone kuita chakadai"
Kune rimwe divi, Pepe Peras, sezvo iye asina zano re chero chinhu, anongotsvaga chimwe chinhu chakafanana ne "mesenller" uye chimwe chinhu chinomutendera kuti aise mimhanzi paaipop uye ndizvozvo. Pepe Peras ane pfungwa dzakavhurika nekuti (zvirinani sekureva linux) iye mhandara pfungwa, asi hongu, Mr. Peras anofanirwa kuda kudzidza (hapana chakaomarara, ndinofunga kumupa katatu kudzvanya paApplications-> Internet- > Emesene chero munhu anogona kuzviita)
Zvichienderana nekuparadzirwa, mamwe anogona kuve akajeka kana kuve nyore kushanda nawo kupfuura vamwe, ndinorangarira kuti pandakatanga ini ndakasarudza Suse nekuti yaive neanodzora pani (Yast) zvakati kana zvishoma senge iyo yemawindo, uye mamwe madhiri , nhasi handidi Zvinorwadza kusava neiyo Yast uye nemufaro handishandisi Suse.
Mutsara wakafanana ndiyo Drakeconf, mandriva, zvakare inobatsira uye iri nyore kushandisa.
Kana iwe uchida kuyedza linux, haufanire kuiisa (hongu, zvinoenderana neyipi distro), muchokwadi, iyo yandiri kumhanya izvozvi ndinoita kubva pendrive nekuti komputa iyi haisi yangu uye ine windows vista yakaiswa (iwe unoziva… Linux inotanga nekukurumidza kubva pendrive pane iyo maonero kubva kune rakaomarara dhisiki uye nehupamhi hwemahombekombe!).
Kurudziro yangu ingave yekuti iwe utsvage distro inobata pfungwa dzako uye woedza pamwe neRarama CD kana pendrive (unogona kubatsira neUNetBootIn) uye nekudaro iwe unobata tambo padanho rakanakira iwe uye kusvikira iwe wawana mugove mumwe chete unonyatsokodzera kuravira kwako uye nzira yekushanda.
Ndinovimba izvi zvange zvichikubatsira uye kuti iwe edza (uye uwane!) Kugovaniswa kwakanakira iwe
Nenzira, Esty, une chikwereti kwandiri mhinduro kumubvunzo nezve izvo iwe zvaungade mune distro !! XD
Kwaziso. Ndinoda kukuudza nyaya yangu. Ndanga ndichiona uye ndichiverenga zvinhu zveLinux kweanoda kusvika makore maviri ikozvino. Ini ndinonzwisisa zvishoma, kunyange dzimwe nguva, mweya unobatsira, unodzora madaro uye kuverenga zvimwe zvinhu nenzira yakapfava kunobatsira zvakanyanya. Ndakafunga, nekangu kadiki komputa uye chirongwa chekuziva, kuisa Ubuntu 8.10. Kuisirwa maviri ekutanga yaive njodzi isingaenzaniswi, zvese zvakatanga chaizvo, pakupedzisira zvakarovera uye zvakapedzwa! Mwedzi miviri yapfuura ndakanzwirazve komputa nekusiya uye ndakasiya XP chikamu uye Ubuntu pane imwe. Zvese zvinhu zvaifamba mushe kusvika, svondo rapfuura, zvakabonderazve, izvozvi Ubuntu haatombovhura uye inondiudza kuti haina kuziva giraidhi kadhi uye ini handizive chimwezve nekuti ini handizive Chirungu. .
Zvese zvandakaona kusvika pari zvino nezve Ubuntu zvinoita kunge zvakasimba, zvakanyatsofungidzirwa uye zvinoshanda kwandiri. Ini handiregi uye ndichaisa zvakare.
Asi izvo zvandiri kuda kukusiira iwe mamwe maanovice. Rimwe rematambudziko makuru atinoda kudzidza pano uye pane kuomarara kwezviratidzo. Izvi zvakasunganidzwa nenyaya yekuti munzvimbo zhinji, mune ino Ubuntu, vanowanzove nehasha dzakaipa nevatangi. Muchokwadi, ndiri kugadzirisa kusahadzika nekuverenga muzviuru yenzvimbo kudzamara ndawana nzvimbo yandinonzwisisa zviri kutaurwa. Ini handina kutora chikamu mune chero foramu nekuti vari kutyisidzira. Ini handisati ndakwanisa kuwana yangu Ubuntu kuti ivandudze zvakanaka uye ini handina kukwanisa kuziva kuti nei, hazvina basa, ndichaiwana.
Hongu, ndinogona kukuudza kuti izvi zvinondishamisa: Chirevo cheUbuntu ndechekuti: Software yevanhu uye zvinoitika kuti muMharaunda avo vanoedza kusvika kune ino sisitimu vanobatwa zvakashata. Ndicho chikonzero apuro uye peya musimboti inoita senge zano rakakura kwandiri.